Initiative loo abuuray in la mideeyo shaqada ka dhaxaysa OpenSUSE Leap iyo SUSE Linux Enterprise | Laga soo bilaabo Linux
Initiative loo abuuray si loo mideeyo shaqada udhaxeysa OpenSUSE Leap iyo SUSE Linux Enterprise
Dadka ka tirsan OpenSUSE waxay bilaabeen inay tixgeliyaan waxqabad si loo ilaaliyo horumarka iyadoo lala kaashanayo noocyada OpenSUSE Leap iyo SUSE Linux Enterprise waana taas - Gerald Pfeifer, SUSE agaasimaha farsamada iyo gudoomiyaha guddiga kormeerka ee OpenSUSE, ssoo jeediyay in beeshu tixgaliso hindise ah in isu keena horumarka iyo dhisidda geeddi-socodka qaybinta OpenSUSE Leap iyo SUSE Linux.
Tani waa la sara kiciyey maxaa yeelay hadda OpenSUSE noocyadiisa kala duwan ayaa ku saleysan set aasaasiga ah ee baakado loogu talagalay qaybinta shirkadda 'SUSE Linux', laakiin xirmooyinka OpenSUSE laga soo ururiyey si ka duwan baakadaha ilaha. Nuxurka soo jeedinta ayaa ah in la mideeyo shaqada dhismaha qeybinta iyo adeegsiga xirmooyinka diyaarka u ah in la isticmaalo ee SUSE Linux Enterprise ee OpenSUSE Leap.
Maanta waxaan hayaa warar xiiso leh iyo soo jeedin aan u gudbiyo: SUSE waxay rabtaa inay qaado tillaabo dheeri ah oo ku saabsan furitaanka bulshada furan ee SUSE waxayna soo jeedinaysaa in la furo xiriirka OpenSUSE Leap iyo SUSE Linux Enterprise heer cusub.
Gudaha, fikraddan waxaa loo yaqaan "Xidhitaanka booska boodka" waxayna soo jeedineysaa in la xoojiyo lana mideeyo si dhow:
Bulshooyinka Horumarinta, adoo diirada saaraya OpenSUSE Leap oo ah barxad horumarineed oo loogu talagalay bulshada iyo wada-hawlgalayaasha warshadaha.
Bulshooyinka isticmaala, iyagoo ka faa'iideysanaya faa'iidooyinka saldhigga sumcadda ganacsiga deggan iyo xawaaraha tabarucaadka bulshada.
OpenSUSE Leap iyo SUSE Linux Enterprise (SLE) saldhigyada koodhka, ma aha oo kaliya wadaagista ilaha, laakiin sidoo kale waxay siinayaan SUSE Linux Enterprise binaries si loogu daro OpenSUSE Leap.
Marxaladda koowaad, wuxuu damacsan yahay inuu isku daro saldhigyada koodhka isgoysyada OpenSUSE Leap 15.2 iyo SUSE Linux Enterprise 15 SP2, hadday suurogal tahay, iyadoo aan luminin shaqeynta iyo xasilloonida labada qeybinta.
Marxaladda labaad, waxaa barbar socda nooca caadiga ah ee OpenSUSE Leap 15.2, waxaa la soo jeediyay in la diyaariyo nuqul gooni ah oo ku saleysan feylasha la fulin karo ee SUSE Linux Enterprise oo sii daa nooc ku meel gaar ah Oktoobar 2020.
Marxaladda seddexaad, bisha Luulyo 2021, waxaa la qorsheynayaa in la dejiyo sii deynta OpenSUSE Leap 15.3, iyadoo la adeegsanayo faylal la fulin karo oo laga helo SUSE Linux Enterprise oo ku jirta.
Adeegsiga isla baakadaha ayaa fududeyn doonta ka guurista min qeybsi kale, waxay keydineysaa isku-duwidda iyo tijaabinta ilaha, ka takhalusi doonta dhibaatooyinka ku jira faylalka muraayadaha (dhammaan kala duwanaanshaha lagu qeexay heerka feylka fekerka waa la midayn doonaa), waxayna fududeyn doontaa dirista iyo ka shaqeynta farriimaha qaladka (kuu oggolaanaya inaad ka fogaato baaritaanka noocyada kala duwan ee xirmooyinka ).
OpenSUSE Leap waxaa hormarin doona SUSE oo ah barxad horumarineed oo bulshada ah iyo la-hawlgalayaasha dibadda. Isticmaalayaasha OpenSUSE, isbeddelka ayaa faa'iido u leh awoodda loo leeyahay adeegsiga nambarka qaybinta warshadaha oo deggan iyo xirmooyinka si fiican loo tijaabiyay Cusbooneysiinta ku saabsan xirmooyinka laga saaray sidoo kale waxay noqon doonaan kuwo guud oo si wanaagsan ay u tijaabiyeen kooxda SUSE QC.
Waan ku faraxsanahay inaan aragno Leap iyo Tumbleweed oo koraya oo kobcaya, oo ay weheliyaan SUSE Linux Enterprise.
Dadaalkan ay wadaan injineeradeenu ee ka garab shaqeynaya kuwa kale ee ka tirsan bulshada OpenSUSE ayaa ka faa'iideysan doona qof kasta oo ku lug leh sannado badan oo soo socda.
Kaydinta OpenSUSE Tumbleweed wuxuu sii wadi doonaa inuu noqdo madal lagu horumarinayo xirmooyin cusub loogu talagalay OpenSUSE Leap iyo SLE. Nidaamka wareejinta isbeddelka ee xirmooyinka saldhigga ah isma beddeli doono (dhab ahaantii, halkii aan ka soo ururin lahayn xirmooyinka SUSE src, waxaan isticmaali doonnaa xirmooyinka laba-geesoodka ah ee ka baxsan).
Dhammaan baakadaha la wadaago waxay sii wadi doonaan helitaanka Adeegga Furan ee Furan si wax looga beddelo loona sameeyo fargeeto.
Haddii ay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo shaqeyn ka duwan ee codsiyada guud ee ka furan OpenSUSE iyo SLE, shaqeynta dheeriga ah waxaa loo wareejin karaa xirmooyinka OpenSUSE gaar ah (oo la mid ah kala soocida sheyga sumadda) ama in lagu guuleysto ka mid noqoshada shaqooyinka lagama maarmaanka u ah shirkadda 'SUSE Linux Enterprise'.
Xirmooyinka naqshadaha RISC-V iyo ARMv7 ee aysan taageerin SUSE Linux Enterprise ayaa la soo jeediyay in si gooni gooni ah loo soo ururiyo.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato, waad hubin kartaa faahfaahinta Xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Initiative loo abuuray si loo mideeyo shaqada udhaxeysa OpenSUSE Leap iyo SUSE Linux Enterprise
Apple iyo Google Team Up iyo Daahfurka Wadajirka Qalabka Raadinta COVID-19 Tani ma noqon doontaa dhamaadka Asturnaanta?